Isivivinyo Samahhala Esizwakalayo 2020 - Izinsuku zokuqala ezingama-30 Zanoma ngubani - Izipesheli
Kuzwakala ipulatifomu enhle online yabasebenzisi abathanda izincwadi. Abaningi bethu abanawo amandla okufunda ngaso sonke isikhathi. Ezwakalayo izama ukukunikeza ipulatifomu yokulalela izincwadi. Insiza ye-audiobook iyinsizakalo enhle kakhulu yabantu abalwela ulwazi. Kungumkhiqizo we-Amazon osebenzayo futhi onomtapo wezincwadi omkhulu. Ukuzijabulisa komsindo kuyimboni enkulu eya ngokuya ithandwa.
Isikhathi sokunakwa kwentsha sehla ngokushesha. Kuhle ukuba nenketho yokukhetha i-audiobook. Manje, ngokuzwakalayo, amathuba okuzijabulisa awapheli. Kulo mhlahlandlela, sizobheka ukuthi singasijabulela kanjani isilingo samahhala esizwakalayo.
Izinyathelo Zokuthola Isivivinyo Samahhala Esizwakalayo - Izinsuku zokuqala ezingama-30
Noma ngubani angabhalisela isivivinyo samahhala esizwakalayo. Izinsizakalo okwamanje zitholakala kuphela ezifundeni ezimbalwa. Ngalesi sifundo, sisebenzisa iwebhusayithi ye-Audible USA. Yindawo enhle ongazama kuyo insizakalo yabo ye-audiobook. Nazi izinyathelo zokubhalisela isivivinyo samahhala.
Njengomsebenzisi omusha, kufanele uvakashele iwebhusayithi esemthethweni Ezwakalayo. Ungachofoza kusixhumanisi esilandelayo - https://www.audible.com/ . Kuzokusa ekhasini labo lasekhaya. Lapha ungachofoza kunkinobho yamahhala ethi Chofoza ukuze Uzame Ezwakalayo. Yindawo enhle ongathanda ukujabulela amabhuku alalelwayo amangalisayo.
Iwebhusayithi izokuqondisa kabusha ekhasini lokungena ngemvume le-Amazon. Njengoba i-Audible manje isevisi ye-Amazon, une-akhawunti eyodwa yakho konke. Iningi labantu selivele linayo i-akhawunti ye-Amazon. Ungangena ngemvume usebenzisa lezo ziqinisekiso lapha futhi. Abasebenzisi abangenayo bangenza i-akhawunti entsha kalula. Kufanele uchofoze ekwenzeni inkinobho entsha ye-akhawunti ukuqala ngenqubo.
Abasebenzisi kufanele bangeze imininingwane yabo yokukhokha ukuqala isilingo samahhala esizwakalayo. Ungangeza imininingwane yekhadi lesikweletu noma imininingwane ye-Paypal lapha. Abasebenzisi abaningi banezimfanelo zabo eseziphephile ngesici sokulondoloza se-Amazon. Isivivinyo samahhala ngeke sikhiphe noma yiliphi inani kumthombo wakho wokukhokha. Izogcina yonke imininingwane yakho iphephile ekukhokhelweni okuphindayo ngokuzayo. Chofoza kunkinobho yesilingo samahhala ukuqala ukuhlola.
Voila! Unomtapo wolwazi omkhulu we-audiobook otholakala nawe. Abasebenzisi bangaqala ukulalela ababhali babo abayintandokazi ngokushesha nje lapho kuqala icala.
Uthola ini ngesivivinyo samahhala esizwakalayo?
Kunokusetshenziswa okuningi okuhle ongakujabulela ngesivivinyo samahhala. Nazi ezinye zezinto eziphawuleka kakhulu okufanele wazi.
Icala liyatholakala izinsuku ezingama-30 sezizonke. Ubulungu bukunikeza ukufinyelela kweyodwa i-audiobook yakudala yamahhala kusuka kumtapo wezincwadi wabo.
Ungajabulela futhi ama-audiobook abo okuqala. Akukho ukulinganiselwa uma kukhulunywa ngokuqala okuzwakalayo. Kuyisiteji esihle ukukhulisa ulwazi lwakho futhi uthole ukuzijabulisa. Ubani owaziyo ukulalela izincwadi kungaba mnandi kangaka.
Akukho ukuzibophezela uma kukhulunywa ngesilingo samahhala. I-Amazon ikuvumela ukuthi ukhansele okubhaliselwe nganoma yisiphi isikhathi. Ingenye yokusetshenziswa okungalibaleki ukuthi lesi silingo samahhala sinikele. Uze uthole isikhumbuzi sezinsuku eziyisikhombisa ngaphambi kokuphela kwecala. Kukunika sonke isikhathi ukukhansela okubhaliselwe ngesandla. Ungagcina ngokonga amadola ambalwa ngale ndlela elula.
Kunezinhlelo eziningi zezempilo ezikhethekile ezitholakalayo ezizwakalayo. Ilungele abantu abenza ijimu eningi noma i-yoga. Ungafaka umhlahlandlela wezempilo oqabulayo ngenkathi uthambisa umzimba wakho. Lokhu kukusiza ukuthi ugxile ekusebenzeni futhi uthole imiphumela eminingi.
Uma ungumfundi ungabhalisela Isaphulelo sabafundi ukuhlela.
Lezi ngezinye zezinzuzo zokuqala zokusebenzisa ipulatifomu Ezwakalayo. Bonke abafundi bethu kumele ngabe sebevele bacabanga ngokubhalisela isivivinyo samahhala.
Insizakalo ezwakalayo iza nezici eziningi ezihlukile. Kulesi sigaba, sibheka ukuthi uzozuza kanjani ekubhaliseni kwayo.
1. Lalela noma kuphi
I-Amazon iyinkampani yezobuchwepheshe enkulu kunazo zonke emhlabeni njengamanje enezinye ezinhlanu ezinkulu. Imisebenzi yabo ayilona ihlaya emakethe. Ipulatifomu Ezwakalayo isiyatholakala kuwo wonke amadivayisi.Ungalanda futhi ufake uhlelo lokusebenza kuma-smartphone nakumathebulethi akho. Itholakala kubo bobabili i-iOS kanye nabasebenzisi be-Android.
Ingxenye ehamba phambili ukuthi konke kungaphansi kokuvumelanisa okungaguquki. Awudingi ukukhathazeka ngamabhukhimakhi we-virtual audio. Abasebenzisi bangakhetha ngqo lapho begcine khona. Kuyasebenza noma ushintshela kudivayisi ehlukile. Kuyisici seminithi esiletha ukufinyelela okukhulu kubathengi.
2. Umtapo Wezincwadi Omkhulu
I-Amazon isitolo sezincwadi esikhulu kunazo zonke online. Akumangazi ukuthi Ezwakalayo yikhathalogi ebanzi kunazo zonke yama-audiobook emhlabeni okwamanje.
Banokuhlelwa okukhulu kwama-Classics nokukhishwa okusha. Ungathola inguqulo ye-audiobook cishe yazo zonke izihloko ezitholakala online. Yindawo ekahle yabantu abangakwazi ukuthola amandla okufunda. Manje usungangena kuma-earphone akho ukuze ulalele ama-greats. Okunye ukwengeza okuhle ukuthi Kuzwakala nakho kunokwakheka okuningi. Uhlelo luhle kakhulu kunoma ngubani ofuna ukulalela izindaba ezimangazayo. Eminye imithombo emnandi ifaka phakathi iSandman, Umlando omayelana noMalcolm X, neminye eminingi.
3. Kulula ukuthola
Ukuqoqwa okubonakalayo kwezincwadi kwenza kube lula ukukuthola okukhethile okufanele wena. Manje awudingi ukuya kumtapo wezincwadi ukuthola incwadi. Akunasidingo sokuchitha amahora ukuthola incwadi eyodwa oyidingayo emashalofini. Kuzwakala kunohlelo lwesigaba esiku-inthanethi esisiza ukuhlunga amabhuku alalelwayo ngokushesha. Kwenza inqubo yokusesha ibe lula kubafundi. Kukhona ibha yokusesha uma ufuna ukulalela noma yini ethize. Kunezigaba ezingu-15 + zezincwadi ezitholakala endaweni yesikhulumi. Kuzwakala futhi kuveza uhlu lwezincwadi ezishisa kakhulu njalo ngenyanga.
Kunamathuba amaningi okuzwakalayo nezinto eziningi ongazihlola.
Ezwakalayo - Intengo
Amanani entengo ezwakalayo ayahlukahluka kuzo zonke izifunda. Kuya ngezwe lapho uthenga khona okubhaliselwe. Kwezinye izindawo, okuzwakalayo sekuvele kukhona okuhle. I-USA ingelinye lalawo mazwe. Amanani entengo yesevisi aphezulu kakhulu uma kuqhathaniswa nezifunda ezinjenge-India. Njengamanje, intengo Ezwakalayo ingu- $ 14.99 / mo yabo bonke abasebenzisi base-USA.
Isivivinyo samahhala esizwakalayo siyisidingo kubantu abangakaze bafunde. Kukunika enye indlela yokujabulela izincwadi. Abantu abathanda ukufunda kepha abangasitholi isikhathi bazothanda nensizakalo yabo. Sithemba ukuthi lo mhlahlandlela uzokusiza ngayo yonke imininingwane mayelana nokuzwakalayo. Manje ungajabulela inyanga eyodwa yama-audiobooks amahhala.
isiza esihle sokusakazwa kwama-movie kwamahhala
ungayinikeza kanjani i-minecraft enye inqama
ungayithola kanjani imidlalo yamahhala ku-xbox bukhoma
xhuma i-google ekhaya kukhompyutha